ခရစ်တော်က ဒီမှာ! - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများ > ခရစျတျောကဒီမှာပါ!
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်တစ်ပုဒ်မှာနာမည်ကြီးရုရှားစာရေးဆရာလီယိုတော်စတွိုင်းမှဖြစ်သည်။ သူကနောက်တစ်နေ့တွင်ခရစ်တော်သည်သူ၏အလုပ်ရုံသို့လာမည်ဟုအိပ်မက်မက်သောအိပ်မက်မက်သောဖိနပ်ချုပ်သူမာတင်အကြောင်းကိုရေးခဲ့သည်။ မာတင်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားကာတံခါးပေါက်တွင်ယေရှုကိုမနှုတ်ဆက်ခဲ့သောဖာရိရှဲနှင့်မတူလိုကြောင်းသေချာစေလိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အရုဏ်မတိုင်မီထ။ ဟင်းချိုကိုလုပ်ကာအလုပ်ကိုသွားစဉ်လမ်းကိုဂရုစိုက်စပြုလာသည်။ ယေရှုရောက်လာသောအခါသူအဆင်သင့်ဖြစ်လိုသည်။
နေထွက်ပြီးမကြာမီသူသည်ဆီးနှင်းများတွန်းနေသောအငြိမ်းစားစစ်သားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့သည်။ ဝါရင့်ဟောင်းအနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအနားယူရန်နှင့်နွေးရန်ဂေါ်ပြားကိုချသောအခါမာတင်ကသူ့ကိုသနားပြီးမီးဖိုဘေးတွင်ထိုင်။ လက်ဖက်ရည်ပူသောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ မာတင်ကသူ၏အိပ်မက်နှင့်သူ၏သားငယ်သေဆုံးပြီးနောက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများကိုဖတ်ရှုခြင်းမှနှစ်သိမ့်မှုမည်သို့ရရှိခဲ့ကြောင်းအိပ်မက်ဆိုးအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ လက်ဖက်ရည်ခွက်များစွာနှင့်ဘဝ၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်၌ရှိသောလူများအပေါ်ယေရှု၏ကြင်နာမှုအကြောင်းအကြောင်းများစွာကြားပြီးနောက်သူသည်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှထွက်ခွာပြီးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ၀ ိညာဉ်ကိုအာဟာရပေးသည့်အတွက်မာတင်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။
ထိုနံနက်ပိုင်းတွင်အဝတ်အစားညံ့ဖျင်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏ငိုနေသောကလေးငယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ထုပ်ရန်အလုပ်ရုံအပြင်ဘက်တွင်ရပ်လိုက်သည်။ မာတင်သည်တံခါးအပြင်သို့ ထွက်၍ နွေးထွေးသောမီးဖိုအနီးရှိကလေးကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်မိန်းမ ၀ င်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူ၌စားစရာမရှိကြောင်းသူသိသောအခါသူကသူပြင်ဆင်ထားသည့်ဟင်းချိုနှင့်အင်္ကျီတစ်ထည်၊
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အိမ်ရှင်မတ ဦး သည်သူမ၏တောင်းထဲ၌ကျန်ရှိနေသေးသောပန်းသီးအချို့နှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်၌ရပ်လိုက်သည်။ သူမသည်ပခုံးပေါ်တွင်သစ်သားရိတ်ခြင်းကိုအကြီးအကျယ်အိတ်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ပခုံးပေါ်၌အိတ်ကိုလှိမ့်ရန်သူမအပေါ်စာရွက်ပေါ်တွင်မျှတအောင်ချိန်ခွင်လျှာညှိနေစဉ်စုတ်ပြဲ ဦး ထုပ်တွင်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး သည်ပန်းသီးတစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်သူ့ကိုဖမ်းဆီးကာရဲကိုဆွဲခေါ်လိုသော်လည်းမာတင်သည်အလုပ်ရုံမှထွက်ပြေးပြီးကောင်လေးအားခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်ကန့်ကွက်သည့်အခါသခင်ယေရှုသည်အကြွေးကြီးစွာလွှတ်လိုက်သောကျွန်နှင့်ယေရှု၏ပုံဥပမာကိုမာတင်အားသတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ကောင်လေးကိုတောင်းပန်လိုက်သည်။ လူအားလုံးကိုအထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်မဲ့သူတွေကိုခွင့်လွှတ်သင့်တယ်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤမျှလောက်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဤငယ်ရွယ် rascals အကြောင်းကိုမိန်းမအားတိုင်ကြား ပြီးတော့မာတင်ကိုပြန်ပြောလိုက်ရင်သူတို့ကိုသက်ကြီးရွယ်အိုတွေပိုကောင်းအောင်သင်ပေးတာပေါ့။ ထိုအမျိုးသမီးသည်သဘောတူပြီးမြေးများအကြောင်းစတင်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူသည်မတရားသောအမှုကိုကြည့်ရှုသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောဟုဆိုသော်၊ အိမ်သို့သွားရန်သူမ၏အိတ်ကိုကောက်ယူလိုက်သောအခါကောင်လေးကရှေ့သို့ပြေး။ “ မဟုတ်ဘူး၊ ငါယူသွားပါရစေ” လို့ပြောတယ်။ မာတင်ကလမ်းပေါ်မှာအတူတူလမ်းလျှောက်နေတာကိုသူကြည့်ပြီးသူ့အလုပ်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲမှောင်မိုက်လာတဲ့အတွက်ဆီမီးထွန်းလိုက်တယ်၊ ကိရိယာတွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအလုပ်ရုံကိုတက်လိုက်တယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုဖတ်ရန်ထိုင်နေရင်းသူသည်မှောင်မိုက်သောထောင့်တွင်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်“ မာတင်၊ မာတင်၊ မင်းငါ့ကိုမသိဘူးလား” ဟူသောအသံကိုသူမြင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာငါပါ၊ ငါတိုးတိုးပြောလိုက်တဲ့အသံပါ။ စစ်သားဟောင်းကထွက်သွားလိုက်သည်။ သူကပြုံးလိုက်ပြီးသွားပြီ။
ဒါဟာငါပါပဲ၊ အသံကထပ်တိုးတိုးတိုးပြောလိုက်သည်။ ထိုထောင့်မှ စ၍ မိန်းမသည်မိမိသားကိုချီ ယူ၍၊ သူတို့သည်ပြုံးပြီးထွက်သွားကြသည်။
အဲ့ဒါငါပဲ! စကားသံကနောက်တစ်ခါတိုးတိုးပြောလိုက်သည်။ မိန်းမကြီးနှင့်ပန်းသီးကိုခိုးသောယောက်ျားလေးများသည်ထောင့်မှထွက်လိုက်ကြသည်။ သူတို့ကပြုံးပြီးတခြားသူတွေလိုပျောက်ကွယ်သွားတယ်
မာတင်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ဟာသူဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသူ၏ဓမ္မသစ်ကျမ်းနှင့်အတူထိုင်တော်မူ၏။ စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်မှာသူဖတ်ခဲ့တယ်။
„Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen“).„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25,35 နှင့် ၁၄)။
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဝန်းကျင်ရှိသူတို့အားယေရှု၏ကြင်နာမှုနှင့်ကြင်နာမှုကိုပြခြင်းထက်ခရစ်ယာန်အဘယ်အရာက ပို၍ အရေးကြီးသနည်း။ ယေရှုသည်ငါတို့ကို ချစ်၍ ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသကဲ့သို့၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်း၊ ခမည်းတော်နှင့်ခမည်းတော်၏အသက်တာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲသို့ဆွဲဆောင်။ သူတစ်ပါးအားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွန်အားပေးခဲ့သည်။